Orinasa mpamantatra gazy maro - Mpanamboatra mpamantatra entona maro any Shina, mpamatsy
Sokajy famaritana mahazatra: CH4 \_ O2 \_ CO \_ H2S \_ CO2 \_ SO2, mari-pana 1. Ny paompy namboarina mahery vaika dia manome fikorianana mitohy 2. Ny fandrefesana mari-pana tsy manam-paharoa 3. Afaka mamantatra entona sy hafanana enina samihafa. Misy ny sensor tsy miankina azo atao handrefesana ny hafainganan'ny rivotra, ny tsindry ary ny hamandoana. 4. Fampitana sensor avo lenta avo lenta 5. Rafitra fitantanana kalibration automatique Tianyun TS-CLOUD automatique 6. 24 ora firaketana fandrefesana haingana 7. Aseho famaritana avo lenta 8. Polycarbonate henjana sh ...
1. Ny paompy voaorina matanjaka dia manome onja mitohy 2. Ny fandrefesana mari-pana tsy manam-paharoa 3.Afaka mamantatra entona sy hafanana enina samihafa. Misy ny sensor tsy miankina azo atao handrefesana ny hafainganan'ny rivotra, ny tsindry ary ny hamandoana. 4. Fampitana sensor avo lenta avo lenta 5. Rafitra fitantanana kalibration automatique Tianyun TS-CLOUD automatique 6. 24 ora firaketana fandrefesana haingana 7. Aseho famaritana avo lenta 8. akorandriaka polycarbonate henjana, mora raikitra 9. mety ny bokotra lehibe hiasa amin'ny fonon-tànana 10. Uni ...
Model ： CD4X Brand: TOPSKY Fampiharana: CD4X dia ampiasaina amin'ny fitsapana CH4 (0-4%), CO2 (0-5%), CO (0-1000ppm), O2 (0-25%) miaraka amin'izay. Azo itokisana sy mora ampiasaina ity fitaovana ity. Izy io dia mety amin'ny fipoahan'ny gazy sy ny fipoahan'ny arintany sy ny etona amin'ny toe-javatra mampidi-doza. Azonao atao ny manantona azy amin'ny tarehy miasa amin'ny fitrandrahana arintany ary miverina ny lalan'ny rivotra. Endri-javatra lehibe: Aseho maody: andalana roa, tarehimarika efatra, fantsom-pisehoana dizitaly mena 2,3 inch, Afaka mahita mazava tsara ianao ao anatin'ny 30 metatra. 200-1000Hz Frequency sy angona tariby RS485 ...
finday multi-gazy CD4A
Fepetra takiana: Modelina fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana momba ny fiarovana ny arintany: CD4A famaritana 1.detect CH4, O2, CO, CO2 miaraka amin'izay koa 2. Fiantohana 2 taona 3. Fiaraha-mientana ambany sy avo lenta 4.Exibd I IP54 Fampiharana : CD4 (A) mpitsikilo multi-gaigy portable dia fitaovana azo antoka sy azo antoka fipoahana ary natao hanakanana ireo entona. Izy io dia afaka manara-maso ny loza ateraky ny atmosfera efatra, anisan'izany ny gazy karbonika (CO), oxygen (O2), combu ...
mpitsikilo entona tsy misy tariby iR119
Endri-javatra lehibe: iR119 dia fampitana data tsy misy tariby lavitra an'ny detector gazy kompite, fampitana data amin'ny alàlan'ny fampandrenesana modely tsy misy tariby, fampiasana rindrambaiko fanaraha-maso, ny mpandray dia afaka mahazo ny angon-drakitra PAD IR119 maro sy fanaraha-maso, manome ny tena- fampahalalana momba ny fikarohana fotoana ary ampidino ny fanairana fanairana rehefa ny refin'ny fifantohana entona. IR119 dia manana asan'ny programa ary afaka mandray sensor iray ka hatramin'ny dimy azo ampiasaina hamantarana ny gazy misy poizina ...
Detector gazy azo raisina organika miovaova VOC
Fepetra takiana: Modelina fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana momba ny fiarovana mitrandraka arintany: modely iGas Pro PID VOC: iGas Pro PID dia maneho ny haitao PID efa mandroso. i Gas Pro PID VOC no detector VOC miloko manokana kely indrindra manerantany. Afaka mamantatra ny karazan-VOC rehetra izy io amin'ny mari-pana sy hamandoana samihafa. Haingana, azo antoka ary marina ny fitsapana. Izy io dia mihatra amin'ny fepetra asa mampidi-doza izay misy gazy misy poizina na mirehitra. Afaka manome e ...
Detecteur Multi-Gas azo entina CD10
Endri-javatra: karazana fandrefesana mahatratra 10 karazana. Afaka mandrefy ny hafainganam-pandehan'ny rivotra ianao amin'ny alàlan'ny fametahana gazy multifunction Built-in santionany paompy, azo ferana santionany lavitra santionany batterie azo soloina, naharitra 120H Fampidirana: Fanairana metinera Terminator CD10 fampandrenesana entona azo entina multifunction dia tafiditra tanteraka fandrefesana methane, gazy karbonika, dioxide solifara, oxygen, carbon monoxide, hydrogen sulfide, hafainganan'ny rivotra, mari-pana, hamandoana, tsindry avy amin'ny atmosfera. 3.7-in lehibe ...
Portable CH4, O2, CO, H2S mpamantatra gazy CD4
Fampiharana: CD4 portable Multi-gazy detector dia fitaovana azo antoka sy azo antoka fipoahana ary natao hanakanana ireo entona. Izy io dia afaka manara-maso ny loza ateraky ny atmosfera efatra toy ny gazy karbonika (CO), oksizena (O2), entona mora may (% LEL), ary hidrôdro sulphide (H2S). Ny detecteur malefaka sy maivana, CD4 portable Multi-gas detector dia mampihetsika fanairana azo henoina, hita maso ary mihetsiketsika raha sendra aretina ambany na avo. CD4 portable Multi-gas detector dia tsy manam-paharoa i ...
Detector gasolika CTL1000-100 CO & H2S
Laharana maodely: CTL1000 / 100 Fepetram-pahafantarana: Fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana CO & H2S mari-pahaizana multigas CTL1000 / 100 fitaovana elektronika azo antoka sy fipoahana ary natao hamantarana ny CO & H2S amin'ny tontolon'ny toeram-pitrandrahana arintany. Miaraka amin'ny sensor electrochemical import, mora tohina sy avo lenta izy io. Ny habeny sy ny maivana dia mora entina ao am-paosy Noho ny tsy fahatairana, dia miaro sy maharitra ampiasaina izy io. Ampiasaina ao amin'ny ...
Detector gazy CYT25-1000 O2 & CO
Laharana maodely: CYT25 / 1000 Fepetram-pahafantarana: Fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana CYT25 / 1000 O2 & CO dia fitaovana azo antoka sy azo antoka fipoahana ary natao hamantarana ny O2 & CO amin'ny tontolon'ny toeram-pitrandrahana arintany. Miaraka amin'ny sensor electrochemical import, mora tohina sy avo lenta izy io. Ny habeny sy ny maivana dia mora entina ao am-paosy Noho ny tsy fahatairana, dia miaro sy maharitra ampiasaina izy io. Ampiasaina ao amin'ny un ...
CJT-4-1000B Methane CH4 & Carbon Monoxide CO Detector gazy
Fepetram-pahafantarana: Fanamarinana fanamarinana fanamarinana momba ny fitrandrahana arintany sy fitrandrahana arintany Model Model: CJT-4 / 1000B Fampiharana: CJT-4 / 1000B CH4 ＆ CO amin'ny mpamantatra entona 1 ao anaty entona dia fitaovana azo antoka sy azo antoka hipoaka ary natao hanakanana ireo gazy . Izy io dia afaka manara-maso ny monoxide karbonika (CO), entona mora may (% LEL). Compact sy maivana, CJT-4 / 1000B portable CH4 ＆ CO amin'ny detector gazy 1 dia mampihetsika fanairana maheno sy azo jerena raha sendra ambany na avo ...
Methane azo entina sy Oksizenina 2 CH4 ＆ O2 ao anaty Detector gazy 1
Fepetram-pahafantarana: Fanamarihana fanamarinana fanamarinana fanamarinana taratasy fanamarinana ny fitrandrahana arintany momba ny vanja arintany: CJYB4 / 25 Fampiharana: CJYB4 / 25 portable CH4 ＆ O2 ao anaty mpamantatra gazy 1 dia fitaovana azo antoka ary azo antoka fa hipoaka ary natao hanakanana ireo gazy. Izy io dia afaka manara-maso ny oxygène (O2), entona mandoro (% LEL). Compact sy maivana, CJYB4 / 25 portable CH4 ＆ O2 ao anaty 1 detector gazy dia mampihetsika fanairana maheno sy azo jerena raha sendra misy fanairana ambany na avo. CJ ...